TTSweet: ကျွန်မ မာစတာ ...
Posted by T T Sweet at 12:35 PM
Aunty Tint August 20, 2014 at 1:34 PM
Any way they should try the best as much as they can for their future.
Nice post with thanks.
စိတ်မရှိပါနဲ့နော်.. သိပ်မရှင်းလို့ပါ.. CV မှာ Master ဘွဲ့ရတယ်လို့ ထည့်ရေးထားတယ် မဟုတ်ဘူးလား.. သူတို့က အဲဒါကို မဖတ်ကြည့်ထားကြဘူးလား.. ဘွဲ့လက်မှတ်ကိုမြင်မှ ဘာလို့ အထင်တကြီးဖြစ်ကြတာလဲဟင်?
T T Sweet August 20, 2014 at 5:14 PM
သိပြီးသားလို့ထင်ပါတယ်။ CV မှာ ရေးပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့ မျက်စိနဲ့ မျက်ဝါးထင်ထင် ဘွဲ့လက်မှတ်ကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ သူတို့စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ ကိုယ်လဲမသိပါဘူး။ ၂ယောက်လုံး အဲလို ပြုမူခဲ့တာပါပဲ။
Thank you , sis.
Anonymous August 22, 2014 at 9:52 PM
Thanks sis for your encouragement :D wish your family all the best
ဇွန်မိုးစက် August 31, 2014 at 8:29 PM
Happy Blog Day, sis! Miss you.
T T Sweet August 31, 2014 at 8:51 PM
Miss you too Zune. Thanks for mention me in your blog post. You are very sincere and love you. When will you come back?
most of our batch missed that chance............ :(
some not even finished YIT
Thank you sis for your post. I hope the young students will see your post and get their motivation to learn for their future. Wish you and your family happy and healthy.
It is absolutely right and thanks for this post.